ကြယ်ပြာ| October 2, 2012 | Hits:8,854
တရုတ်၏ စီမံကိန်း စာချုပ်များ ပြန်ပြင်ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ တိုက်တွန်းသယံဇာတ တူးဖော်ရေး လိုင်စင် တင်းကျပ်မည်တန်းမြင့်ဆန်စက်များ ဂျပန်နှင့် ပေါင်းထောင်မည်နိုင်ငံတကာ ကားကုမ္ပဏီများ၏ အရောင်းပြခန်းများ ဖွင့်ခွင့်ပြုလူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် မြန်မာပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Tatoethiha Thiha October 2, 2012 - 4:56 pm	koreaနိုင်ငံကိုတိုင်နေစရာတောင်မလိုပါဘုးသူဟာကျွန်တော်တို.မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ.အတွက်ကြောင်.မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေနဲ.အရေးယူလို.ရပါတယ်။koreaမှာရှိနေတဲ.မြန်မာတွေလဲပြစ်မှု.ကျုးလွန်ရင် korea ဥပဒေနဲ.ဘဲအရေးယူခံရတာပါဘဲ။korea နိုင်ငံသားဆိုပြီးကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။
Reply	တိုးတိုး ကဗျာ October 2, 2012 - 10:30 pm	ကျန်တော်က ထိုင်းမှာနေတာပါ ကိုးဒီးယားတွေ စိတ်ကို သိသင့်သလောက်တော်တော်သတိထားမိနေပါတယ် ကိုးဒီယားတွေက ကောက်ကျစ်တယ် ၇ိုင်းတယ် ဂတိမတည်တတ်ဘူး ညစ်ပတ်တယ် ထိုင်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဟာ မသိခင်တုန်းက သိုးေ၇ချုံထားတဲ့ဝံပလွေ ကိုးယားတွေရဲ့ဓံကို တော်တော်လေးလူးလဲခံခဲ့၇ဘူးပါတယ် အခုဆို ထိုင်က ကိုးယားတွေကို လုပ်ငန်းနဲပက်သက်ပြီး နေ၇ာမပေးတော့ပါဘူးကျန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတတ်မှူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အထူးသိထားသင့်တာ ထိုင်း နဲ့ ကိုးဒီးယားပါ ဘယ်လိုမှ အပြည့်ဝယုံလို့မ၇သူတွေပါ………….ကျန်တော်သတိထားမိသလောက်ပါ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..နေမျိုး…ခေတ္တ phuket
Reply	lin tun October 3, 2012 - 9:38 am	အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဘဲဗျာ၊၊ ကျွန်တော်ကကိုရီးယားမှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမပြောနဲ့ အခုကိုရီးယားမှာတောင်လုပ်ငန်း၇ှင်ကအလုပ်သမားတွေကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်၇ိုက်ဖို့မပြောနဲံဆဲတာတောင်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မဆဲရဲဘူး။ အခုကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒိလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အံ့သြဖို့တောင်ကောင်းတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေ ဒိအတိုင်းကြည့်မနေပါနဲ့အရေးယူပေးပါ။ နို့မို့ဆိုယင်ဒိကောင်တွေက တခါလုပ်လို့ရယင် လုပ်လို့ရတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်းလုပ်တတ်တဲ့အကျငိ့်ရှိတယ်.
Reply	kyawsan myanmar October 3, 2012 - 12:37 pm	Please hell out these bastard Korean, give the lesson to them strongly by law. We have to defend our people. They are too rude.